मोरङका १ लाख बालबालिकालाई दादुरा रुवेलाको खोप लगाइँदै
मोरङका १ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुवेलाको खोप लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा पाँचौँ दादुरा रुवेला खोप अभियान आगामी फागुन र चैत महिनामा सञ्चालन हुने भएको हो ।
प्रदेश नं. १ का जिल्लाहरूमा फागुनमा खोप अभियान सञ्चालन हुँदै छ । १ फागुनदेखि १ महिनासम्म चल्ने अभियानमा मोरङका मात्र १ लाख ९ सय ९ सय २९ बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
विराटनगरमा बुधबार समन्वय समिति, सरोकारवाला व्यक्ति र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख बस्नेतले यस्तो जानकारी दिँदै दादुरा रुवेला निरुपणका लागि अभियान चलाइएको बताए ।
सन् २०२३ भित्रमा नेपालबाट दादुरा रुवेला निरुपण भएको घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०२० भित्रमा घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पूरा नभएपछि सन् २०२३ भित्रमा नियन्त्रण गर्ने सरकारी तयारी रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा दादुरा रुवेला निरुपण भए पनि नियन्त्रण भइनसकेको उनले बताए । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं. १ मा ३२ जनामा दादुरा भएको पाइएको जनाइएको छ । मोरङमा मात्रै १३ जनामा दादुरा भएको तथ्यांकले देखाएको छ । मोरङको सुनवर्षी र रतुवामाईमा दादुरा भएको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार देशभरिका १ हजार ६ सय ४५ मा गरिएको परीक्षणमा ३ सय ६६ जनामा दादुरा भएको पाइएको थियो ।
दादुराबाट बच्न बच्चा ९ महिना पुगेपछि पहिलो मात्रा र १५ महिनामा दोस्रो मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ । दादुराको खोपसँगै मोरङमा पोलियो थोपा पनि खुवाइँदै छ । अभियानअन्र्तगत जन्मिएदेखि पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाइने कार्यक्रम छ ।
फागुन ६ देखि १४ गतेसम्म मोरङका ८ वटा स्थानीय तहका ४१ हजार १ सय ७२ बालबालिका र फागुन १६ देखि २४ सम्म विराटनगर महानगरिपालिकासहितका ९ वटा स्थानीय तहका ४७ हजार ८ सय ४६ बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने अभियान रहेको स्वाथ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख वस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा कानेपोखरी, पथरी शनिश्चरे, रतुवामाई, कटहरी, धनपालथान, जहदा र रंगेलीमा पोलियोथोपा खुवाइने कार्यक्रम छ । दोस्रो चरणमा विराटनगर, बुढीगंगा, ग्रामथान, बेलबारी, केराबारी, सुन्दरहरैँचा, लेटाङ, उर्लाबारी र मिक्लाजुङमा पोलियोथोपा खुवाइने स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २९, २०७६, १५:२५:००